Tababare Soo Bandhigay Laba Arimood Oo Qariib Ah Oo Uu
Tababarihii hore ee kooxda Arsenal ee Arsene Wenger ayaa la ogaaday laba arimood oo qariib ah oo uu uga dacwooday xidhiidhka kubbada cagta Ingiriiska ee FA-ga intii lagu jiray dhamaadka waqtigii dheeraa ee uu Arsenal soo maamulayay.
Arsene Wenger ayaa waqtiyo kala duwan ku soo qaatay Arsenal isaga oo muddo rubuc qarni ku dhaw kooxda soo maamulay laakiin tabarihii Premier league ee Tony Pulis ayaa soo bandhigay labadii arimood ee qariibka ahaa ee uu Arsene Wenger uga dacwooday FA.
Labadan arimood ayaa ka dhacay kulan ay kooxdii Arsenal ee uu Arsene Wenger hogaaminayay la ciyaartay kooxda Stoke City halkaas oo uu Wenger ku lahaa rekoodh aad u liitay oo kooxdiisa dhibaato wayn ku noqday.
Arsenal ayaa rekoodh aad u xun ku lahayd garoonka Stoke City kaas oo ay kooxaha waa wayni si joogto ah ugu dhibtoon jireen waxayna Gunners halkaas ku guuldaraysatay shan kulan oo Premier League ah iyo hal kulan oo FA Cupka ah taas oo muujinaysa xalaada adag ee uu Wenger goobtan kala kulmi jiray.
Tababare Tony Pulis oo kooxo badan soo maamulay ayaa shaaciyay in Arsene Wenger uu xidhiidhka kubbada cagta Ingiriiska ee FA-ga uga dacwooday gacan tuurashadii mucjisada ahayd ee uu xidigii kooxda Stoke City ee Rory Delap uu aduunka kaga yaabsan jiray.
Jamaahiirta kubbada cagta iyo tababarayaasha ayaan marnaba ilaawi karin qaabkii aan la rumaysan karin ee uu Rory Delap kubbadaha gacan tuurashada ah ugu soo samayn jiray fursado goolal lagu dhaliyo, waxa uu awood u lahaa in haddii kubbadu ka baxdo kala badhka garoonka ay ciyaartu soo gali jireen xarada ganaaxa si uu madaxa ugu soo saaro.
Arintan ayaa Arsene Wenger dhibaato wayn ku noqotay wuxuuna FA-ga ka dalbaday in xidigii kooxda Stoke City ee Rory Delap laga ganaaxo in uu gacan tuurashada amakaag ahayd laga joojiyo taasoo aan suurtogal noqon.
Arinta labaad ee uu Tony Pulis shaaciyay in Arsene Wenger uu uga dacwooday FA-ga ayaa ah in uu Wenger uu kooxda Stoke City garoonkeeda ku sifeeyay mid cawshku aad ugu baxay oo aan ku haboonayn in lagu ciyaaro.
Arsene Wenger ayaa kooxda Stoke City ku matalay sida koox ah ‘rugby team’ isaga oo ku durayay kubbadihii dhaa dheeraa ee ay caanka ku ahayd ee ay kooxaha waa wayn ku dhibaatayn jirtay.
Tababarihii hore ee kooxda Stoke City ee Tony Pulis oo shan jeer Arsene Wenger guuldarooyin soo baday ayaa isaga oo ka hadlaya Wenger waxa uu yidhi:”Markii uu Wenger markii ugu horaysay sheegay ee uu noogu yeedhay koox Rugby team ah, waxay ahayd markii saddexaad ee aanu iyaga gurigayaga ku garaacnay.
Tony Pulis oo sababtii hadalka Wenger keentay sharaxaya ayaa yidhi: “Isagu waxa uu doonayay in uu ka fogaado su’aasha ah sida koox ka hibo yar Arsenal oo aan meel Arsenal u dhaw wax ku kharash garaynin, oo aan adeegooda iyo awoodooda lahayn ay u sii wado in ay Arsenal garaacdo”.
Toni Pulus oo sheeko kale soo bandhigaya ayaa yidhi: “Patrick Vieira waxa uu aniga ii sheegay: ‘Waxaanu necbayn in aanu u tagno Stoke. Waxaad ahaydeen kooxda kaliya ee uu xaqiiqdii Wenger nagala hadli jiray ee aanu ka hor sii shaqayn jirnay. Idinmaanu garaaci kari jirin oo kaliya”.
Intaas kadib Tony Pulis ayaa arinta qariibka ah ee uu Wenger uga dacwooday FA-ga waxa uu ku yidhi: “Wenger sanad ayuu yimid wuxuuna ka dacwooday cawska aadka u dhaa dher. Waxa uu warqad u qoray FA-ga. Waxaa waajib noqotay in garsoorayaashii iyo calanwadayaashi ay yimaadeen oo ay cawskii cabireen!”.
Kadib waxa uu soo bandhigay dacwada labaad ee uu Wenger u gudbiyay FA-ga wuxuuna yidhi: “Waxaan ogahay in uu kala hadlay in la ganaaxo gacan tuurashada, wuxuuna sheegay in ay waajib tahay in aan loo ogolaan, waxaas oo dhami muusik ayay dhegahayaga ku ahaayeen”.
Gacan tuurashadii layaabka ahayd ee Rory Delap ee uu Wenger doonayay in la ganaaxo ayaa ahayd hubka ugu wayn ee ay kooxda Stoke City ku dhibaatayn jirtay kooxaha waa wayn laakiin waxay dhibata ugu badan ku ahayd Gunners.